Akụkọ - Sixzọ isii iji mụbaa ndụ ngwaọrụ
Six Ụzọ Dịkwuo Tooling Life
Tooling ndụ kemgbe ihe dị mkpa na-emetụta ndị profitability nke ntụtụ ebu onye. Ọ bụrụ na enwere ike iji usoro ezi uche dị na ya iji mee ndụ ebu karịa ihe achọrọ, mgbe ahụ uru ụlọ ọrụ ga-akawanye mma. Ndị a bụ ụfọdụ ụzọ iji melite ndụ ebu.
1. n'ụzọ ziri ezi mwube nke ebu kpochidoro ike
Ọ dị ezigbo mkpa ka ndị kpochidoro ike n'ụzọ ziri ezi ka onye ọ bụla ebu. Ọ bụrụ na onye ọrụ na-eji obere mkpọchi ike, nrụgide ogwu nwere ike karịa ike mkpuchi ahụ ma kpụọ ebu ahụ n'oge usoro ntụtụ. Ọ bụrụ na onye ọrụ na-eji ike mkpọchi gabigara ókè, igwe na-akpụzi ọgwụ ga-etinye oke mkpakọ na mpaghara nkewa, ebe ikuku na ngwongwo ebu, wee si otú a mebie ngwa ọrụ ahụ.
Iji zere ọnọdụ ndị a,
2. Isetịpụ obere nsogbu dị nso.
Mwube a ala-mgbali nso na pịa iji chebe ebu. Nịm elu-mgbali mkpọchi ọnọdụ 0.05 elu karịa n'ezie ebu kọntaktị ọnọdụ. Nke nta nke nta belata ala nsogbu mmechi mgbali ruo mgbe ebu na-adịghị akpọchi. N'oge a, mgbali adahade nwayọọ nwayọọ, ikwe dị nnọọ ezu mgbali maka ebu ka mgbanwe site ala-na-mgbali elu-mgbali mkpọchi elu.
Ihe bụ ihe ọzọ, ka ndị ebu nso oge 0,5 nkeji elu karịa n'ezie ebu mmechi oge chọrọ. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ahụ n'ezie ebu mmechi oge bụ 0,85 sekọnd, ịtọ ebu mmechi ngụ oge ka 1.35 sekọnd.
3. n'ụzọ ziri ezi mwube nke ebu oghere na mmechi
Mwekota ọsọ emetụta okirikiri oge, ma ngwa ngwa gbapụrụ ọsọ na-adịghị mma, ebe ọ bụ na ha nwere ike ime ka ngwá ọrụ na-eyi ma ọ bụ mmebi. O kwesiri ijide n'aka na ntughari site na nso ngwa ngwa iji mechie nwayọ nwayọ ma nwayọ nwayọ na-eme tupu mkpọ na akụrụngwa adaba. Jide n'aka na mgbanwe dị n'etiti ebu breakaway na ebu mepee ọsọ ọsọ dịkwa nwayọ, akụkụ nke na-emepe ọsọ ọsọ na-eme mgbe ihe niile mejupụtara.
4. n'ụzọ ziri ezi mwube ejection
Ezughị oke ọnọdụ ihe nwere ike na-ebelata ngwá ọrụ ndụ n'ihi oké ọrịa strok ma ọ bụ na-ezighị ezi akụkụ ejection, dapụtara na akụkụ mmechi n'etiti ebu halves. Ọ dị mkpa iwepụ ụda akụkụ si ebu n'ụzọ ziri ezi dị ka nkewa ego chọrọ site n'ezie ngwaahịa. Ukwuu ejection ga-ukwuu nsogbu na ejector mkpọ. Na mgbakwunye na injection olu, injection mgbali ekwesịghị ịtọ oke buru ibu, hụ mgbali set ihe eji naanị chọrọ ego.
5. N’ozizi ịtọzi ebu mmiri
Ebu okpomọkụ dị elu na ga nwere a ezighị ezi mmetụta na ebu ndụ, n'ihi ya ebu okpomọkụ ịgba na a kacha nta chọrọ ka anabata akụkụ aesthetics. Ọzọkwa, gbaa mbọ hụ na ọdịiche dị n’etiti ọnọdụ agagharị na ngwa ọrụ edoziri anaghị agafe 6 Celsius. Nke dị elu karịa nke a ga - eduga na ọdịiche nke nrụrụ ọkụ dị n'etiti akụkụ abụọ nke ebu ahụ, na - ebute nsogbu nke oghere na mmechi nke ebu adịghị adị mma, na iyi ma ọ bụ mmebi nke ebu ahụ.
6. akpụzi ihicha na mmezi
Na mmepụta gburugburu ebe obibi, mgbe ịlele, dị ọcha na-etekwa Ebu a kacha nta nke ugboro kwa nnofega. N'oge usoro a, lelee ihe ịrịba ama nke ejiji, dị ka ọkọ, eriri akara, burr na ibe ọla.
Zụlite atụmatụ mmezi mgbochi oge niile, debe ndekọ nke mmezi ebu ma nyochaa ihe omume mmezi ugboro ugboro iji guzobe usoro mmezi mgbochi, nke ga - enyere aka belata mmemme mmezi. Lelee ma slide ohere mpere na-tee na na nkiri slide na-arụ ọrụ kwesịrị. Lezienụ anya na ihe ịrịba ama nke detent ọdịda na omume rụrụ gibs.
Jide n'aka na ihe mmịfe ahụ dị n'ọnọdụ ziri ezi mgbe ị na-apụ na ebu mgbe nhicha na nyocha ọ bụla. Mgbe ebu enweghị ike iji ihe karịrị 6 awa, biko jiri nchara na-egbochi, na juputara na-ekpuchi udidi na polishing ebe iji gbochie ajari.
YF akpụzi e nke ukwuu atụmanya ndị ahịa kemgbe 1996 na injection ebu imewe na-ewu. Anyị bụ ndị a na-aha ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke nwere nnukwu ahụmịhe na-arụ omenala, nkenke ọgwụ na-ebu maka ọrụ dị iche iche. Kpọtụrụ anyị ugbu a maka ịmekọrịta ndụmọdụ na-enweghị atụ na ikwu okwu na onye injinia ihe ọmụma maara ihe.
Ọgwụ Nkedo na Metal Inserts, Omenala akpụzi, Plastic Fanye Nkedo, Akpụzi Factory, Ndị na-emepụta ebu ebu, Ndị na-akpụzi ihe ntanye,